निरुता सिंहलाई २५ वर्षदेखि नछाडेको त्यो प्रश्न
एक समयकी चर्चित अभिनेत्री निरुता सिंहको लोकप्रियता नेपाली फिल्म उद्योगमा अहिले पनि लोभलाग्दो छ ।
विवादमा कम आउने, गसिपबाट सधैं टाढा रहने, पाको पुस्ताकी सुन्दर र भलादमी अभिनेत्री निरुताले त्यसबेला चलचित्रमा काम गर्दा प्रदर्शन हुने सबैभन्दा धेरै चलचित्रकी अभिनेत्रीमा उनकै नाम आउँथ्यो ।
‘नम्बर वान’ अभिनेत्रीको ‘ट्याग’ पाएकी उनै अभिनेत्री एकाएक चलचित्र क्षेत्रबाट टाढा भइन् । बीचको १० वर्ष आफूलाई चलचित्र उद्योगबाट टाढै राखिन् ।
भारतको मुम्बईमा बस्छिन् निरुता सिंह । त्यहाँ इन्टेरियर डिजाइनको काम पनि गर्दै आएकी छन् । बेला मौकामा नेपाल आउँछिन् । नेपाल आएसँगै कहिले अन्तर्वार्ता दिएर त कहिले शुभचिन्तकसँग सेल्फी खिचेर उनको समय बित्छ ।
‘नेपाली चलचित्र मेरो परिवार जस्तै हो,’ उनी भन्छिन्, ‘नेपाल आएका बेला मेरा नजिकका साथीभाइहरू, चलचित्रकर्मी, सहकर्मीहरूसँग भेट हुन्छ । मेरो परिवार उता भए तापनि यता पनि मेरा धेरै आफन्त हुनुहुन्छ ।’
निरुताको तन भारतमा छ तर मन नेपालमा छ । उनको परिचय पनि यहीँ हो नेपाली अभिनेत्री ।
त्यसबेलाका धेरै फिल्ममा उनको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै थियो । उनी १ दशक बढी समय पहिलो नम्बरमा टिक्ने सफल अभिनेत्री हुन् ।
२०६४ सालमा ‘इन्टेरियर डिजाइनिङ’ सिक्न भनेर मुम्बई हानिएकी उनी त्यसपछि बिस्तारै हराइन् । काम राम्रै थियो, काम गरेर दाम पनि राम्रै थियो तर एकाएक चलचित्र उद्योगबाट टाढा हुँदा उनका शुभचिन्तकमा निराशा छायो ।
पुरानो सन्दर्भ सुनाउँदै निरुताले भनिन्, ‘इन्टेरियर डिजाइनिङ सिक्ने र मुम्बई फिल्म क्षेत्रसँग नजिक भई काम सिक्ने सोच बोकेर गएकी थिएँ । इन्टेरियर डिजाइनिङको कोर्स त पूरा भएन तर धेरथोर ज्ञान बटुल्न सफल भएँ । यता छोड्दा धेरैथोरै नराम्रो फिल चाहिँ भयो ।’
मुम्बई गएसँगै निरुता चलचित्र उद्योगबाट पलायन भएको चर्चा चल्थ्यो । ‘मुम्बई जानु कला क्षेत्रबाट पलायन थिएन, विश्राम पक्कै थियो,’ निरुता भन्छिन्, ‘तर म यो उद्योगबाट कहिल्यै टाढा त हुन सकिनँ । यस उद्योगसँग निकट रहेर त नियालिरहेकी थिएँ नि !’
निरुतालाई नेपालमा मात्रै होइन, मुम्बईमा पनि नेपालकी स्टार भनेर प्रशंसा गर्नेहरू भेटिन्छन् । यसले आफूलाई नेपालकी चलचित्रकर्मी हुनुमा गर्व अनुभूति हुने बताउँछिन् ।
नेपालमा यस्तो लोभलाग्दो चर्चा, बलिउडमा उनलाई किन काम मिलेन ? निरुता हाँस्दै भन्छिन्, ‘म यताको स्टार डममै विश्वास गर्थें । उता शून्यबाट करिअर किन शुरू गर्नु ?’ तर उनी १ दशकसम्म किन चलचित्र उद्योगसँग जोडिन सकिनन् ? त्यो उनले खुलाउन मानिनन् । तर भनिन्, ‘समयभन्दा धेरै पावरफुल यो संसारमा केही हुँदैन ।’
मुम्बईमा फ्याट्टफुट्ट बलिउडकर्मीलाई भेट्ने, केही बलिउड फिल्म कम्पनीमा विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गर्ने र भोजपुरी चलचित्रसँगै विभिन्न विज्ञापनमा उनी काम गरिरहिन् ।
उनी बेला–बेला नेपाल आउँछिन् । उनलाई त्यसबेला नेपाल छाड्नुअघि जस्तो माया मिल्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै माया पाएकोमा खुशी लाग्छ ।
उनी सम्भव भएसम्म नेपाल एयरलाइन्सको टिकट काट्छिन् । किनभने नेपाल एयरलाइन्समा धेरैजसो नेपालीहरू भेट्न पाइन्छ । एयरलाइन्समा चढेका नेपाली चलचित्रका फ्यानहरूले देखाएको मायाले उनी मख्ख पर्छिन् । एयर होस्टेजले ‘निरुता दिदी’ भन्दै दिएको ‘ट्रिट’ उनलाई असाध्यै देश प्रेम लाग्ने सुनाउँछिन् ।
एउटा कलाकारले देश छाडेपछि बाहिरबाट पाउने प्रेम असाध्यै पावरफुल हुन्छ । उनले भनिन्, ‘भारतमा भेटिने धेरै नेपालीहरूले अहो तपाईं, देशको स्टार ! फिल्ममा आउनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ । यसले मलाई चलचित्र क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहुँ भन्ने हुन्छ ।’
निरुताले नेपाली चलचित्र उद्योगबाट पाएको मायालाई कहिल्यै नभुल्ने बताउँछिन् । ‘म बेला–बेला नेपाल आउँदा यहाँबाट पाउने व्यवहार, नेपालका गाउँ र कुना काप्चा पुग्दा पाउने व्यवहारले नेपाल र नेपालीहरूबाट पाएको मायाबाट कहिल्यै टाढा पुग्न दिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘मैले जीवनमा जे पाएँ त्यो नेपालबाटै पाएकी हुँ । कसरी यो क्षेत्रबाट टाढा हुन सक्छु ?’
निरुता फेरि अघिको प्रसंगमा फर्किइन् । उनले भनिन्, ‘त्यसबेला काम त पाइरहेकी थिएँ तर इन्टेरियर डिजाइनिङ सिक्न र केही सम्भावना खोज्दै त्यहाँ पुगेकी थिएँ तर यो उद्योगबाट पलायन भएको थिइनँ ।’
निरुता अब चलचित्र उद्योगमा निरन्तर काम गर्ने गरी योजना बनाइरहेकी छन् । लामो समयपछिको ‘ग्याप’पछि उनी पछिल्लो समय चलचित्र उद्योगसँग अरु धेरै निकट हुँदै गएकी छन् ।
केही वर्षअघि निर्माण भएको चलचित्र नाई नभन्नु ल– ५ मा सानो भूमिकामा काम गरेसँगै चलचित्र उद्योगमा ‘कम ब्याक’ गरेकी निरुताले त्यसपछि दाल भात तरकारी, क्याप्टेन लगायत चलचित्रमा काम गरिन् । यी चलचित्रमा निरुताले राम्रै पारिश्रमिक पाइन् ।
राम्रै भूूमिका र आकर्षक पारिश्रमिकमा निरुतालाई काम गराउन खोज्ने निर्माता निर्देशकको लिस्ट अहिले पनि उस्तै रहेछ । निरुताले भनिन्, ‘मलाई अब कुनै चलचित्रमा काम गरेर हिट हुनु छैन । जुनसुकै चलचित्रमा काम गरुँ, फरक स्वाद दिन सकुँ भन्ने लाग्छ । अब स्क्रिप्ट र चलचित्र निर्माण गर्ने टीम हेरेर निर्णय लिन सक्छु ।’
तुलसी घिमिरेले सन् १९९३ मा निर्देशन गरेको चलचित्र ‘दक्षिणा’बाट नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेकी निरुताले त्यसपछिका १ दशक नेपाली चलचित्रमा एकछत्र राज गरिन् । सबैभन्दा धेरै व्यस्त अभिनेत्रीको रूपमा निरुताको नाम आउँथ्यो । अभिनयबाट सबैलाई रुवाउन सक्ने खुबी भएकी अभिनेत्री निरुताले चलचित्रको पर्दामा पाएको दुःख, संघर्ष देखेर दर्शक भक्कानो छोडेर रोए । रंगीनदेखि ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ टेलिभिजनमा निरुतालाई हेर्नेले उनको दुःख सहेनन् । गहभरि आँसु पारे ।
उनी भन्छिन्, ‘त्यसबेला समाजमा नारीलाई हेप्ने, सधैं नारी दोस्रो दर्जामा राख्ने, नारीमाथि कुटपिट गर्नेजस्ता कथा समाजमा व्याप्त थिए । ती कथा पर्दामा देख्दा सबैले आफ्नो पीडा जस्तै भान हुन्थ्यो । जसको प्रतिनिधित्व गर्दा मलाई सबैले रुचाउनुभयो । अब मैले गर्ने र मैले उठाउने भूमिका पनि त्यस्तै रियल कथासँग निकट हुनुपर्छ ।’
निरुतालाई अहिले प्र्राविधिक, अभिनय र स्तरीय हलका हिसाबले नेपालको चलचित्र उद्योग अघि बढ्दा खुशी लागेको छ । तर विगतमा जस्तो गतिला कथाको भने अभाव महसूस भएको छ ।
उनले अभिनय गरेका मनमन्दिर, दर्पण छायाँ, बन्धकी, दुई किनारा, दुःख, आमाको काख, आफन्त, माइती, माइली, सन्तान थरिथरिका, लहना लगायतका २ दर्जन बढी चलचित्रहरू सुपरहिट छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रमा प्राविधिक रूपमा निकै राम्रा चलचित्र बनिरहेको निरुताको भनाई छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको बताउँछिन् उनी । ‘व्यावसायिक र गुणस्तरीय दुवै हिसाबले राम्रा र सफल फिल्म पनि बन्न थालेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो निकै राम्रो कुरा हो । अब हामी स्टोरीबाट छलाङ मार्नुपर्छ ।’
निरुतालाई चलचित्र निर्माण र निर्देशनमा पनि प्रेम छ । उनको अभिनयमा सबैभन्दा बढी रुचाइएको चलचित्र ‘दर्पणछायाँ’ हो । यसका पुरानै कलाकार दीलिप रायमाझी, उत्तम श्रेष्ठ र निर्देशक तुलसी घिमिरेसँग मिलेर निर्माण हुन लागेको नयाँ चलचित्रमार्फत निरुता छिट्टै दर्शकमाझ देखिँदै छिन् । जुन चलचित्रको नाम ‘दर्पण छायाँ फेरि’ हुने सम्भावना छ । ‘ढिलोचाँडो यो प्रोजेक्ट अघि बढ्छ । दर्पणछायाँको कथा जहाँ सकिएको छ, त्यहीँबाट नयाँ कथा अघि बढ्छ,’ उनले भनिन् ।
भर्खरैकी सुन्दर केटी । २२–२५ वर्षकै उमेरबाट बिहेबारे थोरैधेरै कुरा उठिरहन्थे । त्यसबेला उनले यो प्रश्नको सहजै सामना गरिन् । सबैले २५ वर्षको हाराहारीको समयदेखि सधैं सोधिरहने एउटा प्रश्न यसबेला पनि तेर्सियो ।
४८ वर्षको उमेरसम्म बिहे नगर्ने ? निरुताले हाँस्दै भनिन्, ‘बिहे नगर्ने निर्णय गरेको होइन । जन्म, मृत्यु र बिहे भन्ने कुरा माथिबाट लेखेर आएको हुन्छ ।’ उनले फेरि भनिन्, ‘जुन समयमा जन्मिनु छ, त्यो समयमा जन्मिइन्छ । जुन समयमा मर्नु छ त्यो समयमा मरिन्छ । जुन समयमा बिहे हुने हो, त्यो त्यहीँ समयमा हुन्छ ।’
निरुताको जीवनमा बिहे नलेखेकै हो त ? निरुताले हाँस्दै थपिन्, ‘मन मिल्नुपर्छ बिहे नहुने सम्भावना छैन ।’
निरुताले आफूलाई बुझ्ने केटा भेटेको खण्डमा जुनसुकै समयमा आफू बिहे गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । निरुताको रोजाइको श्रीमान कस्तो खालको होलान् ? कुन क्षेत्रमा काम गर्ने युवा रोजाइमा छ होला ? यी सबै प्रश्नको जवाफ उनले एकैपटकमा दिने प्रयास गरिन् । भनिन्, ‘पैसाभन्दा पनि संस्कार जानेको केटा भए पुग्छ । पैसा कमाएको तर संस्कार नभएको केटा भयो भने बर्बाद हुन्छ ।’
निरुताले आफ्नो बढ्दो उमेरले बिहेका लागि कुनै फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ‘बिहेका लागि उमेर भनेको नम्बर मात्रै हो,’ निरुताले थपिन् ।
उनलाई साथीभाइ, घरपरिवार, आफन्तले बिहे गर्न सुझाव त दिइरहेका छन्, दिइरहेका थिए । उनी भन्छिन्, ‘तर मलाई कसैले बिहेका लागि दबाब दिएन । सबैले यस विषयमा मलाई नितान्त निर्णय गर्ने अधिकार छोडिदिनुभयो । परिवारमा पनि जहिले जोसँग बिहे गर्छिस् गर, कोही आयो, राम्रो भेटियो भने गर । यो तेरो निर्णय भन्नुभएको छ ।’
निरुताले संस्कारी व्यक्ति भेटियो भने जुनसुकै जात, धर्म मान्ने, जुनसुकै देशको भए पनि मतलब नहुने कुरा खुलाइन् । तर निरुताले अन्तिममा भनिन्, ‘२५ वर्षदेखि नछाडेको यो प्रश्नको जवाफ अब समयले दिनेछ ।’